MB 2017 aprily - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Aprily
Mba hanolorako azy irery ihany no tsara indrindra dia nandeha niaraka tamin'i Tammy (vadiko) aho hisakafo atoandro any Burger King (araka ny tsironao), avy eo any amin'ny Mpanjakavavy ronono ho an'ny tsindrin-tsakafo (zavatra hafa). Mety hieritreritra ianao fa tokony ho menatra aho amin'ny fampiasana miharihary ireo teny filamatra ao amin'ny orinasa, saingy hoy izy ireo tao amin'ny McDonalds: "tiako io". Ankehitriny tsy maintsy mangataka famelana ny (ary indrindra aho Tammy!) Ianao ary apetraho eo ankilany ny vazivazy adaladala. Ny famelan-keloka dia lakilen'ny fananganana sy fanamafisana ny fifandraisana maharitra sy manome hery. Izany dia mihatra amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny mpitondra sy ny mpiasa, ny mpivady sy ny ray aman-dreny sy ny zanaka - amin'ny fifandraisan'olombelona amin'ny karazan'olona rehetra.
Ny famelan-keloka koa dia singa manan-danja amin’ny fifandraisan’Andriamanitra amintsika. Andriamanitra, izay fitiavana, dia nandrakotra ny olombelona tamin’ny rakotra famelan-keloka izay navelany teo ambonintsika tsy misy fepetra (izany hoe ny fandraisantsika ny famelan-keloka avy aminy tsy mendrika sy tsy misy fiheverana). Rehefa mandray ny famelan-keloka avy amin’ny Fanahy Masina isika ka miaina ao anatin’izany, dia takatsika kokoa sy takatsika kokoa ny maha-be voninahitra sy mahatalanjona ny fitiavan’Andriamanitra, izay aseho amin’ny alalan’ny famelan-keloka. Rehefa nisaintsaina ny fitiavan’Andriamanitra ny olombelona i Davida, dia nanoratra toy izao: “Raha hitako ny lanitra, izay asan’ny rantsan-tànanao, sy ny volana aman-kintana izay noforoninao, dia inona moa ny olona, ​​no hahatsiarovanao azy, sy ny zanak’olombelona? fa ianao no mikarakara azy?" ( Salamo 8,4-5). Izaho koa dia tsy afaka ny ho talanjona ihany rehefa mieritreritra ny amin’ny hery lehibe sy ny fahalalahan-tanan’Andriamanitra amin’ny famoronana sy fikojakojana izao tontolo izao midadasika misy antsika, izay ahitana izao tontolo izao izay, araka ny fantany, ny fahafatesan’ny zanany, fa tsy hita ho tsy misy dikany sy azo antoka. Ireo zavaboary mpanota toa ahy sy ianao, dia mitaky.
Ao amin’ny Galatianina 2,20 Nanoratra i Paoly fa tena faly izy fa Jesosy Kristy, Izay tia antsika, dia nanolotra ny tenany hamonjy antsika. Indrisy anefa fa io fahamarinana be voninahitra ao amin’ny filazantsara io dia revon’ny “tabataba” eto amin’izao tontolo izao mihaingo haingana. Raha tsy mitandrina isika, dia mety tsy hifantoka amin’izay lazain’ny Soratra Masina amintsika momba ny fitiavan’Andriamanitra naseho tamin’ny alalan’ny famelan-keloka. Iray amin’ireo lesona tena manaitra indrindra voasoratra ao amin’ny Baiboly momba ny fitiavana mamela heloka sy ny fahasoavan’Andriamanitra ny fanoharan’i Jesosy momba ny zanaka adala. Nilaza i Henry Nouwen, teolojiana, fa nianatra zavatra betsaka momba izany izy tamin’ny fandinihana ny sary hosodoko nataon’i Rembrandt hoe Ny Fiverenan’ny Zanaka Adala. Izy io dia maneho ny fibebahan’ilay zanaka tsy nirina, ny hamafin’ny fahasarotam-piaroan’ilay rahalahy tezitra, ary ny famelan-keloka feno fitiavana tsy azo ihodivirana ataon’ny rainy izay misolo tena an’Andriamanitra.
Ny ohatra lehibe iray hafa momba ny fitiavan’Andriamanitra mamela heloka dia ilay fanoharana naseho tao amin’ny bokin’i Hosea. Ny zava-nitranga tamin’i Hosea teo amin’ny fiainany dia mampiseho fanoharana ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra tsy misy fepetra sy ny famelan-keloka mihoa-pampana ho an’ny Isiraely mazàna mafy loha, ary izany dia fanehoana mahery vaika ny famelan-keloka, izay omena ny olona rehetra. Nandidy an’i Hosea hanambady vehivavy janga antsoina hoe Gomera Andriamanitra. Misy mihevitra fa vehivavy avy amin’ny fanjakan’ny Israely tany avaratra nijangajanga ara-panahy izy io. Na ahoana na ahoana, dia tsy ny fanambadiana no tian’ny olona ho ara-dalàna, satria nandao an’i Hosea imbetsaka i Gomera mba hivaro-tena. Nisy fotoana nilazana fa i Hosea Gomera no inoana fa nividy vola tamin’ny mpivarotra andevo, nefa nanohy nihazakazaka nankany amin’ireo olon-tiany izay nampanantena ny hahazoany tombony ara-nofo. Hoy izy: “Izaho dia te-hihazakazaka hanaraka ireo olon-tiako, izay manome ahy ny mofoko sy ny ranoko sy ny volon’ondry sy rongony sy ny diloilo ary ny hosotroiko” (Hosea). 2,7). Na dia teo aza ny ezaka rehetra nataon’i Hosea mba hisakana azy, dia nanohy nitady fiombonana feno fahotana tamin’ny hafa izy.
Tena mampihetsi-po ny fomba niverenan'i Hosea hatrany ny vadiny tsy nivadika - nanohy ny fitiavana sy ny famelan-keloka taminy tsy misy fepetra. Angamba i Gomer dia nanandrana nanao zavatra amin'izao fotoana izao, fa raha izany aza, vetivety dia nanenenany ny fotoana nanaovany azy Vetivety izy dia nivadika tamin'ny fomba fiaina nanitsakitsahana azy mba hitadiavany ireo olon-tiana hafa.
Ny fitondran’i Hosea feno fitiavana sy famelan-keloka tamin’i Gomera dia mampiseho fa tsy mivadika amintsika Andriamanitra na dia mivadika aminy aza isika. Io famelan-keloka tsy misy fepetra io dia tsy miankina amin’ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra, fa amin’ny maha-Andriamanitra azy. Tahaka an’i Gomera, dia mino izahay fa afaka mahita fiadanana amin’ny fidirana amin’ny endrika fanandevozana vaovao; mandà ny fitiavan’Andriamanitra isika amin’ny fiezahana hanohitra ny lalantsika. Nisy fotoana tsy maintsy nividy fananana ara-nofo i Hosea Gomera. Andriamanitra, izay fitiavana, dia nandoa vidim-panavotana ambony lavitra noho izany - nomeny an’i Jesosy Zanany malalany “ho fanavotana ny olona rehetra” (1. Timoty 2,6). Ny fitiavan’Andriamanitra tsy azo hozongozonina, tsy mety levona, tsy misy farany, “miaritra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra” (1. Kor. 13,7). Izy koa dia mamela ny zavatra rehetra, satria ny fitiavana "tsy manisa ratsy" (1. Kor. 13,5).
Ny sasany namaky ny tantaran'i Hosea dia mety hanohitra fa ny famelan-keloka tsy misy famelan-keloka dia manamafy ny fahotan'ilay nahavita - ny dikan'ny hoe nekena ny fitondran'ny mpanota. Ny sasany kosa mety hihevitra fa ny famelan-keloka miverimberina dia mitarika ny mpanao ratsy hino fa afaka miala amin'ny zavatra rehetra tiany atao izy. Saingy, mba hahazoana famelan-keloka amim-pahalalahan-tanana dia ilaina ny miaiky fa ilaina io famelan-keloka io - na inona na inona matetika nomena ny famelan-keloka. Ireo izay mieritreritra ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra mba hanamarinana ny ota miverimberina dia tsy hahazo famelan-keloka mihitsy satria ny olona dia tsy manana fahatakarana fa ilaina ny famelan-keloka.
Ny fampiasana famelan-keloka miharihary dia fandavana fa tsy fanekena ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fiheverana toy izany dia tsy mitondra fifandraisana feno fifaliana sy fihavanana amin'Andriamanitra. Saingy, fandavana izany toy izany dia tsy fanesorana ny fanoloran-tena nataony. Manome famelan-keloka ao amin'i Kristy Andriamanitra amin'ny olona rehetra tsy misy fepetra, na iza na iza isika na izay ataontsika.
Ireo izay nanaiky ny fahasoavan'Andriamanitra tsy misy fepetra (toy ny zanaka adala) dia tsy mieritreritra izany famelan-keloka izany. Ny fahafantarana fa voavela heloka tsy misy fepetra izy ireo, ny valintenin'izy ireo dia tsy fiheverana na fandavana, fa fanalefahana sy fankasitrahana kosa, izay aseho amin'ny faniriana hamaly famelan-keloka amin'ny hatsaram-panahy sy fitiavana. Rehefa voavela heloka isika, ny saintsika dia voadio amin'ireo banga izay manangana rindrina haingana eo anelanelantsika, ary miaina ny fahalalahana hitombo amin'ny fifandraisantsika isika. Toy izany koa rehefa mamela tsy misy fepetra ireo izay nanota tamintsika isika.
Maninona isika no te-hamela ny hafa izay nanao ratsy tamintsika? Satria mifandraika amin'ny namelan'Andriamanitra ny helok'i Kristy ao amin'i Kristy. Mariho ny tenin'i Paoly:
Fa aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’i Kristy (Efesiana). 4,32).
Koa tariho ho olom-boafidin'Andriamanitra, tahaka ny olo-masina sady malala, ny famindram-po avy amin'ny fo, ny fahamoram-panahy, ny fanetren-tena, ny fahalemem-panahy, ny faharetana; ary mifandefera ka mifamelà heloka, raha misy mimenomenona; tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo no mba hamelanareo heloka kosa! Fa ambonin’ny zavatra rehetra dia ny fitiavana no fehin’ny fahatanterahana (Kolosiana 3,12- iray).
Raha mahazo sy mankafy ny famelan-keloka tsy misy fepetra izay omen'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy isika, dia afaka mankasitraka ny fitahiana amin'ny fizarana fiainana, fananganana fifandraisana, fananganana fifandraisana, famelan-keloka tsy misy fepetra amin'ny hafa amin'ny anaran'i Kristy.
Ny fifaliana amin'ny fomba famelan-keloka no nitahy ny fifandraisako.
Famelan-keloka: lakile manan-danja amin'ny fifandraisana tsara